All War – Page 33 – Saraar Media
Home›Category: "All War" (Page 33)
0-1 Labo Qarax oo is-miidamin ahaa, ayaa Maanta ka dhacay Xarunta Dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo, kaddib markii lagu weeraray gaari laga soo buuxiyay walxaha Qarxa, kaaso Qaraxyada lagu bilaabay. Qaraxa labaad oo khasaaraha badankiis geystay ayaa dhacay markii ay dad badan oo shacab ahi kusoo xoomeen goobtii uu qaraxii koowaad ka dhacay oo sida ...
00 Halkan ka daawo Madaxweyne Siilanyo oo xadhiga ka jaray mashaariic ay Dawlada Somaliland ka dhistey Laascaanood kuwo cusubna dhagax dhigtey.
00 Gudiga Federaalka ah ee Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee GFHDD, ayaa maanta Magaalada Muqdisho kula kulmay Qaar ka mid ah Ururrada Bulshada Rayidka ah. Haddaba, Kulanka ayaa laga soo saaray War-saxaafadeed kaas oo u Qornaa Sidan:
00 Halkan hoose ka daawo qudbadii Musharaxa Madaxweynaha Xisbiga Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey shirkii Adhicadeeye ee G/Sool
00 Waxaa maanta geeriyooday Madaxweyne ku xigeenkii Dawladii Kacaanka ee Siyaad Bare Maxamed Cali Samatar oo ku geeriyooday Dalka Maraykanka gaar ahaan gobolka Virginia . Maxamed Cali Samatar waxaa uu ka soo qabtey Dawladii Kacaanka Xilal badan waxaana uu ahaa shaqsiga kaliya ee uu Siyaad Bare aad ka u aaminsanaa marka loo eego xubnihii dawladiisa ...